Imba Zvipfuwo zve hwiricheya Users
Kana vanhu vachifunga zvipfuyo zvemumba vanofunga nezvekitsi nembwa chete. Izvo hazvisizvo nekuti kune mazana esarudzo dzemhuka dzaunogona kuwana kubva kunyoka kuenda kumbwa. Kubva wiricheya vashandisi vanogona kunge vachienda kumba kwenguva yakareba kupfuura vamwe vese izano rakanaka kune wiricheya mushandisi kuwana chipfuwo. Kana uchitova nechipfuyo hachirwadzi kuwana chimwe kana kuwana chimwe wiricheya mushandisi iwe ungazive chipfuwo. Muchikamu chino, tichaenda pamusoro pemhuka dzakasiyana dzinozivikanwa dzaungawana nhasi. Mamwe emazano aunowana muchinyorwa chino anogona kuridza bhero saka ramba wakatarisana.
Dzvinyu rinogona kutonhorera kuti riwane nekuti haizi nyaya yekuti unogona kuzvirova dundundu nezvayo asi unotova nayo. Nekuti imhuka dzinokambaira ivo zvinoda zvakakosha hanya kana iwe uchida kuve nechokwadi chekuti vapora. Kunze kwekuve neacouture-proof aquarium iwe uchazoda zvimwe zvekuwedzera senzvimbo yekupisa, iyo substrate yezasi kwetangi, zvimwe zvekudya hongu, uye thermostat yekuyera tangi tembiricha, uye haugone kukanganwa fanicha iyo dzvinyu rinogona kutamba richitenderedza mukati.
Imbwa ndiyo ingangodaro zano rakajairika iwe raunogona kufunga nezvaro. Kune mhando dzakawanda dzembwa dzinogona kunge dziri mumba uye dzisingazoparadze dojo rako. Iwe unogona kuenda nenzira yechinyakare uye uwane imbwa diki. Imbwa diki dzinowanzo bhara zvakanyanya uye dzimwe nguva dzinowanzoita hasha saka chengeta izvo mupfungwa. Imbwa zvine nharo dzakanyanya kuvimbika mhuka dzaunogona kuve nadzo ndosaka vari mans shamwari dzepamwoyo. Iwe unogona zvakare kuvadzidzisa zviri nyore uye haugone kunyatsodzidzisa reptile. Uyezve, iwe unogona zvakare kuwana sevhisi imbwa uye iyo imbwa ichaunza iyo yakawanda yakanyanya kukosha.
Kana iwe usingade kushandisa yakawanda mari saka hamster imhuka inoshanda kuwana. Ivo havadaro inoda zvizhinji maintenance. Kana iwe uine vana zvinogona zvakare kuvadzidzisa maitiro ekutanga kuchengeta yavo yekutanga chipfuwo. Ivo vanofarira kumuka husiku saka usazoshamisika kana iwe uchinge uchinzwa hamster yako ichitanga kurovedza pane ipapo inomhanya vhiri. Iwo ari manheru saka haufanire kunetseka zvakanyanya nezvekuvapa iwo masikati kunyanya husiku kunze kwekunge iwe uchisiya chikafu mangwanani kwezuva rese kana ivo vonzwa nzara. Ivo zvakare kashoma kuruma kunze kwekunge iwe uchivavhundutsa uye ruoko rwako ruchiitika kunhuwa sechikafu.